Azetidine inokonzerwa neheterocyclic organic compound ine matatu maatomu ekaromu uye imwe nitrogen atomu. Iko mvura inotonhorera yekunze uye ine kunhuhwirira kukuru kweammonia uye inonyanya kuenzaniswa nemamwe emaminiti echipiri.
Azetidine nemigumisiro yaro inowanikwa zvisingawanzogadziriswa mumiti yemiti. Zvinonzwisisika, ivo ichinhu chinokosha chemugineic acid uye penaresidins. Zvichida yakawanda yakazara azetidine ine chigadzirwa chakasikwa is azetidine-2-carboxylic acid, isiri-proteinogenic homolog ye proline.